Apple Inozivisa Mazuva eApple Music Festival ichaitwa muLondon | Ndinobva mac
Apple inozivisa mazuva eApple Music Festival ichaitirwa muLondon
Apple ichangobva kuzivisa zviri pamutemo mazuva eiyo inotevera Apple Music Festival ichaitirwa muLondon mwedzi unouya. Sezvazviri tsika mumakore achangopfuura, Apple ichabata ese makonati kuRoadhouse muLondon, segore rapfuura. Gore rino misi yeApple Music Festival ichave kubva munaGunyana 18 kusvika 30.
Gore rapera iyo Cupertino-based kambani yakachinja zita remutambo uyu, iro gore rino rinopemberera iro regumi edition, kubva iTunes Mutambo kuenda kuApple Music Festival, shanduko inonzwisisika tichifunga kuti yaive gore rapfuura apo Apple yakatanga basa Apple Music inoyerera mimhanzi.
Apple Music inodzokera kuLondon munaGunyana kwehusiku gumi. Vagari vemuUK vanogona kuhwina matikiti emakonzati. Vese vashandisi veApple Music vanozokwanisa kutevera ese makonati zvachose mahara. Tiketi yekutengesa ichatanga munguva pfupi. Titevere pa @AppleMusic kuburikidza neTwitter uye Snapchat kuti ugare kumusoro-kune-iyo-miniti pane zvese ruzivo zvine chekuita nechiitiko ichi kuburikidza neiyo hashtag # AMF10.
Parizvino hatizive zita revaartist kana mapoka anozotora chikamu mune ino nyowani, asi nekufamba kwemazuva, makuhwa anotanga kuburitswa uye isu tinokuzivisa iwe nekukasira. Kubva gore rapfuura, Apple yakadzora huwandu hwemazuva akakumikidzwa kumakonzati emumhanzi aya, kubva pamazuva makumi matatu emitambo yekutanga sere kusvika pamakumi maviri emaviri apfuura.
Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi yakawana vanopfuura mamirioni gumi nemashanu vashandisi mushure megore rinopfuura gore mukushanda, chimiro chingadai chisina kuipa dai chisiri chekuti mukwikwidzi wayo wakanyanya wawanawo huwandu hwakaenzana hwevashandisi vanobhadhara mu nguva imwe chete yenguva, gore rimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inozivisa mazuva eApple Music Festival ichaitirwa muLondon
Unoda kudzima XNUMX-Nhanho Verse yeApple ID? Tinokuratidza maitiro ekuzviita
Apple Inotangisa Louisiana Mafashama Red Cross Donation Chirongwa